Faha-60 taonan’ny Thb : Nofaranana tamin’ny Oktoberfest -
AccueilVaovao SamihafaFaha-60 taonan’ny Thb : Nofaranana tamin’ny Oktoberfest
Faha-60 taonan’ny Thb : Nofaranana tamin’ny Oktoberfest
08/10/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Fetin’ny labiera. Ambohipihaonana iray ao anatin’ny volana Oktobra ny « Oktoberfest », izay notanterahina omaly tetsy amin’ny kianjan’ny kanto Mahamasina. Hetsika tafiditra amin’ny famaranana ny faha-60 taonan’ny Thb. Ankoatra ny fanentanana nentin’i Hororat dia nanafana ny seho ny tarika Samoëla sy ny tarika Rossy. Nanohy ny seho nataon’ireo mpanakanto ny tsinjaka niarahana tamin’ny mpikosoka kapila Teejay Jerry.
Nibahan-toerana, ary nanokatra ny seho ireo vazo miteny nentin’i Samoëla. Niverenan’ity mpanakanto ity sy ny gitarany ireo hira nahafantarana azy tany am-piandohana, toa ny « Sexy girl », « folaka ihany », « Hafaliana », « Taraiky »… Tsy diso anjara ihany koa anefa ireo mpankafy ny hira taty aoriana, indrindra ireo voarakitra tao amin’ilay rakikira farany « Radion’ambanivolo ».
Efa nanomboka nampakatra ny gadon-kira taorian’izay ny tarika Rossy, ary farany vao nisy ventiny ny fiarahana tamin’ny fampandihizana nataon’i Teejay Jerry.
Iny oktoberfest iny no namarana ny fankalazan’ny Thb ny faha-60 taonany.
Niteraka resabe ilay sarin’ny zanak’i Andry Rajoelina nivoaka tao amin’ny gazety Le Citoyen ny faran’ny herinandro lasa teo. Avy hatrany dia nihazakazaka namaly izany i Andry Rajoelina tany Ihosy, ary vao mainka nivandravandra ilay foto-pisainana ...Tohiny